Iindaba zesiXhosa, 10:00am, 14 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 10:00am, 14 eyoMdumba 2019
Abaphathi beUCT bajongene nesisombululo sabafundi
Abasemagunyeni kwiYunivesithi yaseKapa bathi bazinikele ekusombululeni imingeni abajamelene nayo abanfundi kwela ziko. Phakathi kwale mingeni kuquka ukwenziwa amakheswa kwezemfundo nakwezezimali kananjalo neengxaki ezambethe abafundi abaphuma kwelakwaMzilikazi. Ingxelo ye-UCT ithi ifumene malunga nezibheno ezingamakhulu asixhenxe zokufuna ukubhaliswa kwakho emva kokuba aba bafundi bekhutshwe ngenxa yokungaqhubi kakuhle kwizifundo kananjalo bamalunga nomyinge wamashumi alithoba ekhulwini abafundi abanezicelo eziphumeleleyo. Le yunivesithi ithi abafundi belizwe laseZimbabwe bajamelene neengxaki zokubhalisa kwaye le nyewe iyasonjululwa lisebe lezekhaya kwakunye ne-SRC.
Ziliqela izindlu ezitshe eDa Noon
Zizindlu ezilishumi elinesibini ezonakaliswe ngumlilo logama ingamatyotyombe angamashumi amane atshe angqongqa kwisitalato iCosmo City eDa Noon. Othethela abenkonzo zomlilo nohlangulo kwisixeko ngu mnumzana Edward Bosch. Kulomlilo konzakele ngokumasikizi inenekazi elinye logama igosa elingumcimi -mlilo lifumene umonzakalo ongephi. Ngabantu abaqikelelwa kwikhulu abashiyeke bengodingindawo.
uPlato wenze intetho yokuphucula eli laseKapa
Uqaphele ukufinca kwakhe intsuku ezilikhulu njengosodolophu wesixeko sekapa izolo umnuzana Dan Plato, nalapho achaze izicwangciso zakhe zokuphucula iimpilo zabemi beli leKapa. Kwintetho yakhe namajelo endaba ubalule imiba eliqela efana nentswela ngqesho,ukulahlwa kwenkukuma kwindawo ezingenzelwanga oko nokunciphisa imiqathango yokusetyenziswa kwamanzi. Uthi ubekele bucala amashumi amahlanu anesithandathu ezigidi zerandi ezizakusetyenziswa ukucoca kwindawo zogobityholo, ishumi elinesine lezigidi zerandi ezizakusetyenziselwa ukongezwa abasebenzi beEPWP abazakuncedisa ekucoceni ekuhlaleni.
Iinkokheli zemibutho ethile zichaphazele uRamaphosa ngobudlelwane obudibene nengcindezelo
Umphathiswa wokhuselo lelizwe unkosikazi Dupuo Letsatsi-Duba uzibhebhethile iingxelo zikasekela mongameli we-EFF umnumzana Floyd Shivhambu zokuba i-SACP ingqinile ukuba umongameli Cyril Ramaposa ubenobudlelane nesebe lezokhuselo lelixa lengcinezelo.Oku kulandela izityholo ezibekwe yinkokheli ye-Cope umnumzana Mosiuoa Terror Lekota zokuba uRamaposa ngumthengisi owayenobudlelane obufingis’iintshiyi namapolisa okhuselo kanye ngelixa lenkohlakalo emandla karhulumente wocalu-calulo ngethuba beseluvalelelweni. Ukanti, i-EFF ihlab’ikhwelo lokuba kuvulwe ikomishoni yophando nanjengoko ingekokokuqala zivela ezi zityholo.
Luyaqhuba uphando lokutsha kwesikolo iZonnebloem
Kuqhutywa uphando malunga nonobangela womlilo ovumbuluke kwisikolo samantombazana eZonnebloem kweli leKapa izolo. Akukho monzakalo ubikiweyo kwaye abafundi bonke ababikwa hlaba. Konakele ngamandla ii-Ofisi. Kiwveki ephelileyo kuvumbuke umlilo kwisikolo samabanga aphantsi i-Holy Cross kwisitalato i-Keizergracht.
Sisekwizikolo njalo…Zisibhozo izikolo zasezilokishini ezizakufumana inkxaso yesisa yezixhobo zokufunda eziphuma kwisixeko seKapa njengenxalanye yenkqubo yaso yokuncedisana nabafundi abangathathi-ntweni. Usodolophu wesixeko umnumzana Dan Plato unikezele ngezinto zokufunda kwizikolo ezimbini eKhayelitsha izolo. Uthi bagxile kwizikolo zabo basekudidi elusezantsi khon’ukuze bafunde ngokukuko.